Political Page ပုလဲသွယ်: ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်
“ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ” ဆိုတဲ့သတင်းက ထွက်ခဲ့တာ အတော်ကြီးကြာပြီ။ (စောမောင် + ခင်ညွန့်) နဲ့ (သန်းရွှေ + ခင်ညွန့်) ခေတ်ကတည်းကပါ။ အငြင်းပွါးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးခင်ရွှေရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့တွေကတော့ -
(၁) Honorary Doctor of Philosophy in Business Administration. Washington University ( U.S.A) in 1998 နဲ့
(၂) Honorary Doctor of Philosophy in Business Administration. Southern California University (U.S.A) in 1998 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ဝီကီပီးဒီးယား) ထဲမှာတော့ ဒီလိုပါထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ "(ဦး) ခင်ရွှေသည် ဂုဏ်ပြုပေးသည့် စီးပွါးရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့ ၂ ခုရရှိထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် နှင့် ကာလီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်တို့၏ “ဒီပလိုမာထုတ် ငွေလုပ်စက်ရုံ” တွေကနေ ရထားတဲ့ဘွဲ့တွေသာ ဖြစ်ပေသည်။" ဒီလို ပါရဂူဘွဲ့ကို ငွေပေးဝယ်လို့ရတာကို Degree mill ဒီဂရီစက်ရုံလို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။
The Hall of Shame for Fake PhDs ထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။ “Dr. Khin Shwe with (bought) PhDs from Diploma Mills ဒေါက်တာခင်ရွှေ နှင့် ဒီပလိုမာစက်ရုံတွေကနေ ဝယ်ထားတဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့များ”
မစ္စတာခင်ရွှေဟာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ Honorary Ph.D. ဒေါက်တာဘွဲ့ကို Washington University ကနေ အမှန်တကယ် ရရှိခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လာ ၆ဝဝဝ ပေးရင် For-profit diploma mill ငွေလုပ်စက်ရုံသဘောလုပ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ဆိုတာတွေ ဝယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ဟာ တခု အပါအဝင် ဖြစ်တယ်။ (ဟာဝိုင်ယီ) ကနေပေးတာဖြစ်ပေမဲ့ (ပင်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား) စာတိုက်လိပ်စာကနေ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ Ph.D. ဒေါက်တာဘွဲ့တွေကို ဒေါ်လာ ၆ဝဝ ကနေ ၆ဝဝဝ ပေးရင်ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ Southern California University တောင်ပိုင်း (ကယ်လီဖိုးနီးယား) တက္ကသိုလ် ဖြစ်တယ်။ တကယ့် ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ University of Southern California နဲ့ နာမည်ဆင်အောင် လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုတ်လို့ပေါ်တာဆိုရင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အထက်လွှတ်တော်အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကနေ ဝင်အရွေးခံတဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ တင်ခဲ့လား၊ စစ်ဆေးခဲ့လား သိချင်ပါတယ်။
ဦးခင်ရွှေ နေပြည်တော်ရုံခန်းမှာ ဘယ်လိုရေးထားလဲတော့ မသိပါ။ (ပီအိတ်ခ်ျဒီ) ဒေါက်တာက အိန္ဒိယမှာလဲ အမတ်တွေထဲ အများကြီးရှိတယ်။ တခါက ဗမာပြည်အရေး ထောက်ခံပေးဘို့ရာ ဒေါက်တာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတဲ့ ကြေးဝါဆိုင်းဘုတ် ချိတ်တားတဲ့ အမတ်တဦးဆီဝင်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်တဲ့အခါ “ဗားရ်မား” ဘယ်နားရှိတာလဲတဲ့ဗျာ။
1. "Institutions Whose Degrees are Illegal to Use in Texas". Texas Higher Education Coordinating Board. 2012. Retrieved 30 October 2012 http://www.thecb.state.tx.us/index.cfm?objectid=EF4C3C3B-EB44-4381-6673F760B3946FBB
2. "Tycoon Turf". The Irrawaddy. Retrieved 27 October 2012 http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=5010&page=12
3. "University settles suit to stop business from using its name". Washington University in St. Louis. Retrieved 27 October 2012. http://wupa.wustl.edu/record_archive/1998/09-03-98/articles/lawsuit.html
4. "Washington University," the No.2"diploma mill" in the world?". Student Life. 30 August 2012 Retrieved 27 October 2012. http://www.studlife.com/forum/op-ed-submission/2012/08/30/washington-university-the-no-2-diploma-mill-in-the-world/
10. Profile of developer". Zaykabar. Retrieved 30 October 2012 http://www.nationaldevelop.com/zaykabar.htm
11. The Hall of Shame for Fake PhDs http://burmesewithfakephds.blogspot.in/2011/11/hose1-zaykabar-fake-dr-khin-shwe-with.html